Amaphoyisa abambe isigebengu esinesihluku esabulala ingane engakazalwa ngenxa kamakhalekhukhwini | Scrolla Izindaba
Amaphoyisa abambe isigebengu esinesihluku esabulala ingane engakazalwa ngenxa kamakhalekhukhwini
Mhla zingama-29 kuMasingana kulo nyaka, emini libalele, wadubula umama okhulelwe amahlandla amathathu, wabulala ingane engakazalwa; konke lokhu kwenzeka ngenkathi ezama ukuphuca lowesifazane oneminyaka engama-31 umakhalekhukhwini.
Kodwa ngisho nangaleso sikhathi sokulwela impilo yakhe kanye neyengane yakhe, isisulu sikwazile ukunikeza amaphoyisa incazelo ecacile yezigebengu ezintathu ezimuhlasele ngesihluku.
Lesi sigameko senzeke ngezikhathi zabo-13h20 e-Desdemonia Close e-Booysens Park e-Port Elizabeth.
Isisulu esasinezinyanga eziyisithupha sikhulelwe ngaleso sikhathi sadutshulwa esiswini, ethangeni kanye nasengalweni yangakwesokudla.
Lowo osolwa ngokubulala ubalekele amaphoyisa ngosizo lwegenge yendawo, kuze kwaba izolo lapho amalungu ophiko lwe-Anti-gang embopha endlini e-Kayne Street e-Booysens Park ngehora lokuqala ekuseni.
Okhulumela amaphoyisa u-Colonel Priscilla Naidu uthe ezinyangeni ezimbalwa ebaleka lo mfana oneminyaka engama-22 wenze ubugebengu obuningi.
“Umsolwa uyathinteka nasecaleni lokuzama ukubulala okusolwa ukuthi lenzeka mhla ziyi-16 kuMandulo kowezi-2020 eKhayamnandi e-Despatch.
“Kusolakala ukuthi ngabo-03h30 ngalolu suku okukhulunywa ngalo, isisulu, esineminyaka engama-22, satshelwa ukuthi intombi yalowo mlisa ifuna ukusibona.
“Ngesikhathi ehamba ku-Bantu Holomisa Road, umsolwa nomunye wesilisa beza kuye baqala bamdubula.”
Umsolwa ubekwe amacala amabili okubulala nokuzama ukubulala kanti uzovela eNkantolo yeMantshi yase-Port Elizabeth nase-Uitenhage.